Qalabkii Idaacada Andalus ee Kooxda Shabaab oo Jowhar laga raray | KEYDMEDIA ONLINE
Qalabkii Idaacada Andalus ee Kooxda Shabaab oo Jowhar laga raray
Jowhar(Keydmedia Online) - Kadib markii ay magaalada ku soo dhowaadeen Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowladda KMG ah ayaa waxaa magaalada Jowhar hawada laga saaray Idaacadii kooxda Shabaab ee Andalus ee magaalada ka howlgali jirtay, ayadoona gabi ahaanba qalabkii Idaacada laga raray magaalada.
Qalabka ay hadda rarteen Maleeshyaadka Shabaab ee ay u baxsadeen magac Andalus waxaa horay u lahayd Idaacad lagu magaxaabi jiray Radio Jowhar taasoo ay xoogg kula wareegeen kaidbna ay u bixiyeen magaca Andalus.
Ilaa hadda ma cadda sababta ay u rarteen Idaacada hasayeeshee ilo wareedyo Joiwhar ku suggan ayaa Keydmedia u xaqiijiyay in qalabka Idaacada ay Shabaab ula soo dhaqaaqeen dhinaca magaalada Kismaayo oo ay hadda isku arruursanayaan Maleeshiyaadka Shabaab.
Sidoo kale qaar ka tirsan dadka ku nool Johar ayaa Keydmedia u sheegay in muddo ku siman 48 saac aysan maqlin Idaacada Andalus ee ka howlgali jirtay magaalada Jowhar.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in qalabka idaacada loo raray sababa amaan maadaama ay magaalada wali ku sugganyihiin wariyaashii laga dhacay oo hadii ay Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ay magaalada ku soo dhaadaan ay dhici kartoi inay soo weeraraan.